Isi ihe ise dị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịmepụta iyi ego ọhụụ na nsogbu | Martech Zone
Site na ndi otu ahia gha akwusi ma dozigharia uzo ha nke 2020, odi nkpa ikwu na ogbaaghara na ogba aghara di nma na ndi oru.
Isi ihe ịma aka ahụ ka dị. Kedu otu esi ejikọ gị na ndị mmadụ iji jigide iguzosi ike n'ihe ma nweta ndị ahịa ọhụrụ? Otú ọ dị, ihe gbanweworo kpamkpam bụ ụzọ na ụzọ iru ha.
Nke a na - eweta ohere maka ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịgafe iji nweta uru. Lee aro ise ndị chọrọ ịba uru n'ọrịa ọrịa coronavirus.
NDỤMỌDỤ 1: Setịpụrụ Uche Mindset
Ọ dị mma ma nwee ọmarịcha nnukwu ebumnuche n'elu nzukọ a, mana ndị a ga-eriju afọ n'ime ndị ọrụ iji gbaa ndị ọrụ niile ume ịkekọrịta ọhụụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ oge na-egbu ndị ọrụ, yabụ hụ na ha ghọtara ihe mere ụlọ ọrụ ji agbanwe usoro ya dị oke mkpa. Nke a ga - enyere ndị ọrụ aka ịchọta ohere dị iche iche na ndị ahịa, na - emepụta ego ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ndụmọdụ 2: Ndozi nsogbu
Nke a bụ ihe ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile ga-awụli elu. Ezigbo mgbasa ozi okike bụ maka nsogbu nsogbu - azụmaahịa anaghịkwa echekarị nsogbu ndị siri ike karịa ugbu a. Ikike ịhụ ihe n'ụzọ dị iche na iweta echiche ọhụrụ bụ otu n'ime ebumnuche kachasị maka ụlọ ọrụ okike, na nke ahụ adịbeghị mkpa karịa.
Ndụmọdụ 3: Re-ojiji nke Afọ
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-emefu ego maka obere afọ ego. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịmefu ego dị ukwuu dị ka nzukọ na ihe ngosi, na ndị ọzọ, a ga-ekenyegharị ya ọsọ ọsọ iji jigide ọsọ. Vingkwaga nke a na gburugburu dijitalụ na-abịa na uru ya, ya bụ iji ọdịnaya eme ihe ọzọ. Hostingnweta nnọkọ dijitalụ dị ka ihe omume n'ịntanetị ma ọ bụ webinars ga-enye iyi nke ọdịnaya nwere ike iji oge na ugboro ugboro. Site na inye ọdịnaya gafee ọtụtụ ọwa, nke a ga-azụlite ezi mkpọsa ọtụtụ ọwa.
Ndụmọdụ 4: Mee Mundane, Obi itingtọ
Mmemme dijitalụ bụ ezigbo ihe atụ nke ụzọ aghụghọ nke, ọ bụrụ na ọsọ ọsọ, nwere ike ibibi aha ọma. Nkwenye ahụ nwere ike ịbụ na naanị nhọrọ bụ ịhazi webinar na-adịghị mma, dịka ọmụmaatụ, iji banye n'ihu ndị ahịa. N’ihi ya, ụdị mmadụ ọ bụla ma ọ bụ imepụta ihe ọ bụla na-achụ àjà. Ọ bụ ezie na ihu na ihu ihu na-ejedebe, nke ahụ apụtaghị na ahụmịhe nke onwe agaghị enyefe. Sterzụlite echiche okike ga-egosi ndị ahịa na ị nwere ike idozi isi okwu, nke ga-eme ka mmekọrịta gị sie ike ma hụ ogologo ndụ.
Ndụmọdụ 5: Banye n’ihu ndị ahịa
A gaghị enwe ụlọ ọrụ na-emetụta ọrịa n'ụzọ ụfọdụ site na ọrịa coronavirus. Ikwu okwu na ndi ahia na ighota otu Covid-19 siri metuta atumatu ahia ha aghaghi imeghe otutu ohere igbanye na ohere ndi ozo nke ha gha echeghi.
Anyị ahụwo na mbụ njikere nke ndị ahịa ịnabata ụzọ ọhụrụ nke iche echiche iji dozie nsogbu ndị ha na-eche ihu ugbu a. Site n'ịgbaso ihe agile, okike obibia gị n'ụlọnga management, e nwere ohere zuru ezu iji kwalite mmekọrịta ahịa na merie ọhụrụ azụmahịa.
Tags: gị n'ụlọngacontentnsogbuimewe gị n'ụlọngamkpọchimindset